Sarkaal Ka Tirsan Safaaradda Soomaaliya Ee Nairobi Oo La Xiray & Ameeriko Oo Ka Hadlay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Nairobi – Mareeg.com: Shir jaraa’id oo xarunta safaarada soomaaliya ee dalka Kenya ay ku qabteen mas’uuliyiinta safaarada ayaa waxa ay kaga warbixiyeen mid kamida shaqaalaha safaarada Soomaalida ee dalka Kenya oo ay dhawaan xireen ciidamada ammaanka ee dalka Kenya.
Safiirka dowlada Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya, Maxamed Cali Nuur (Americo) ayaa sheegay in ciidamada amniga ee dalka Kenya ay ku soo wargaliyeen maalinimadii khamiista inay xireen Xoghayahii sedaxaad ee safaarada Soomaalida ee dalka Kenya, Ilyaas Yuusuf Warsame.
Safiirka ka gaabsaday sababta ka danbeya xariga Ilyaas Yuusuf Warsame waxana uu intaasi ku daray in aanay jirin ilaa iyo hada danbi lagu cadeeyey balse ay socdaan baaritaano la xiriira xariga diblomaasigan ka tirsanaa shaqaalaha safaarada Soomaalida ee dalka Kenya.
Dhanka kale, waxaa shir jaraaid ku qabtay magaalada Muqdisho waxgarad iyo masuuliyiin si weyn u cambaareeyey xarig ciidamada la dagaalanka argagaxisada ee dalka Kenya kula kaceen diblomaasi ka tirsanaa safaarada Soomaalida ee magaalada Nairobi.
“Ilyaas Yuusuf Warsame waa nin la yaqaano ma ahan argagaixiso, qaraxna shuqul kuma lahan, xariga ciidamada KENYA kula kaceena waa qalad isagoo heysta baasaboor diblomaasi ah” ayuu yiri C/kaafi.
Ilyaas Yuusuf Warsame oo ahaa Xoghayahii sedaxaad iyo madaxii Brotokolka safaarada Soomaalida ee Kenya ayaa maalintii 4aad u xiran Ciidanka argagixiso la dagaalanka dalka Kenya oo su’aalo ka weydiinaya tuhun la xiriira inuu ku lug lahaa qarax dhowaan ka dhacay garoonka dayuuradaha Jomo Kenyatta.